Qaaday Nasasho Blog ah! | Martech Zone
Qaaday Nasasho Blog ah!
Jimce, Maarso 23, 2007 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Aad ayaan ugu fiicanahay isku dayga 1 ee tayada boostada kujira oo ay ku xigto qoraal ku saabsan xiriiriyeyaasha ugu fiican iyo maqaallada shabaqa in muddo ah hadda. Xalay waxaan qaatay a Nasashada Blog. Fikrad ahaan, nasashada balooggu waxay ka dhigan tahay inaan sariirta aaday oo aan gamay markii aan wax akhriyay. Aniga maahan
Xalay waxaan sii waday horumarinta khariidad loogu talagalay Google Map oo loogu talagalay samafal maxalli ah halkan magaalada. Waa mashruuc xiiso leh oo xor ah oo laga yaabo ama laga yaabo in aan laga faa'iideysan - laakiin ka mid ahaanshaha wax aad uga weyn sida aad had iyo jeer tahay waa waayo-aragnimo weyn. Waxay i bartay dad cusub waxayna iisoo bandhigtay warshado cusub, oo had iyo jeer lagu daro.
Waxaan sidoo kale haystay emayllo xiiso leh oo gadaal iyo gadaal u socda oo ka doodaya tayada tirada marka la eego maareynta alaabtayada. Tani had iyo jeer waa wada hadal xiiso leh, halista ah in aan waxba la keenin ama la keeno wax laga yaabo inaysan fiicnayn. Waa baaq adag. Waxaan ku kalsoonahay caqliga horumariyaasheena oo aan arki doonaa waxa sixirka ah ee ay ku guuleysan karaan.
Aniga ayaa layla xisaabtami doonaa, markaa runtii naftayda ayaan banaanka u dhigayaa. Dadku badanaa way kaa yaabaan markaad awood siiso, in kastoo. Taasi waa wax aan ku wacdiyo, markaa waxaan ku fiicanahay inaan ku noolaado ereyadayda!
Waligay kumaan yeelan blogger marti ah laakiin waan ku farxi lahaa inaan la wadaago iftiinka. Meel ii dhiib faallo ama ila soo xiriir hadaad xiisaynayso. Xaqiiqdii uma baahnid inaad yeelato baloog, in kastoo. Xaqiiqdii, waxaan aad u jeclaan lahaa in qof aan wax ku qorin uu ku biiro wadahadalka. Waxaa laga yaabaa inaad 'qabato cayayaanka'.
Loogu talagalay saaxiibbada wax ku qora ee blogga ah, haysashada blogger martida ahi ma keentaa shaqo ka yar ama ka yar? Kaliya waan xiiseynayaa.
Jooji Qorista Mashiinnada Goobidda
Siideynta Buugga! Renée Pawlish: Nefilim, Bilowga sharka
Mar 23, 2007 at 1: 28 PM
Barta martida ayaa wali shaqeyneysa. Waxyaabaha ayaa ah inaadan u badneyn inaad hesho khibrad blogger sida aad tahay - badanaa waa qorayaal cusub oo doonaya inay martida u noqdaan blog. Waxaa jira isgaarsiin badan oo lagula tacaalo sidoo kale.
Mar 24, 2007 at 9: 55 PM
Haddii la i siiyo mowduuc aan runtii faahfaahin ka bixin karo, markaa waan ku farxi lahaa inaan marti kuu ahaado. Taasi waa mid ka mid ah waaya-aragnimooyin badan oo aanan weli soo marin, oo haddii aan nolosha ka dhigo waxay hubaal ahaan doontaa hal dhacdo weyn.
Apr 3, 2007 at 12: 27 PM
Marka aan dhiso taraafikada waxaan isku dayi doonaa inaan ku daro bloggers martida ah. Waxay umuuqataa sidii inay noqon laheyd shaqo badan laakiin labada baloog ee wax qora ayaa ka faa'iideysan doona iskaashiga. Waa wax aan u maleynayo in dad badan oo wax qora ay tahay inay sameeyaan